Nambarany fa tsy nisy resaka tsindry avy any amin’ny manampahefana avy any ambony izany ny fandraisan’izy ireo an-tanana iny raharaha iny fa nitovy tamin’ny raharaha rehetra ihany. Tsy nisy fijerena ny maha mpisolovava na maha zanaka jeneraly, hoy izy nandritra ny famotorana natao. Mikasika ny vaovao nivoaka ihany koa fa tsy tonga teny amin’ny Fitsarana ilay mpisolovava nandritra ny fiakaran’izy roalahy fampanoavana ny talata lasa teo dia nambarany fa tena tonga teny tokoa izy nanatrika. Nomarihiny manokana fa nitory ilay mpisolovava ihany koa ilay zanaka jeneraly roalahy na dia efa naiditra am-ponja vonjimaika aza miandry ny fitsarana azy. Fikasana ny hamono sy familiana fiara tao anatin’ny hamamoana no hanenjehan’izy ireo ilay mpisolovava. Eny anivon’ny fampanoavana moa ity fitoriana ity ankehitriny, raha araka ny nambarany hatrany. Nomarihin’ity jeneraly ity fa tsy nisy ambadika hafa akory ny tsy nahafahan’izy ireo nijery ilay maratra tany amin’ny hopitaly ny faran’ny herinandro teo fa tsy maintsy niandry fahazoan-dalana avy amin’ny dokotera izy ireo. Mbola karohina fatratra kosa ilay olona fahatelo hita tao anatin’ilay horonantsary niparitaka iny.